DAAWO+XOG: Guddiga Doorashooyinka Jubbaland oo qodob adag hor-dhigay Ergada Beesha Caalamka ee tagtay Kismaayo.
August 16, 2019 NEWS 1
KISMAAYO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday waxyaabaha sida tooska ah ugu wada hadleen wakiilada caalamiga ah ee shalay tagay magaalada Kismaayo iyo guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Jubbaland, kuwaas oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka Madaxweyne-nimada.
Ergada caalamiga ah ayaa hor-dhigay guddiga doorashooyinka ee la aqoonsan yahay arrimaha ku wajahan in la fuliyo dalabka mucaaradka ee ah in Isbedel lagu sameeyo hanaanka doorashada, gaar ahaana sharuudaha iyo waqtiga oo dib loo furo, taas oo ay sheegeen in aytahay labada arrimood ee ay cabashada ka qabaan guddigu.
Gudoomiyaha guddiga Doorashooyinka ayaa su`aalo ka weydiiyey beesha Caalamka, waxay guddigan laftirkiisa ka aaminsan yihiin musharaxiinta ama siyaasiinta doonaysa in ay tartamaan, waxayna u sheegeen in aysan guddiga aqoonsaneyn.
Guddiga ayaa ugu jawaabay beesha Caalamka in aysan waxba soo kordhineyn mudo-kordhin, maadaama ay kasoo horjeeda siyaasiintaas gabi ahaanba arrimaha la xariira sharciyadda doorashooyinka iyo Dastuurka Jubbaland oo guddigan awoodda siinaya.
Beesha Caalamka ayaa markaas ka dib sheegtay in ay dib iskugu laaban doonaan oo ay markale arrimahan ka hadli doonaan 2 maalin ka dib, waxaana muuqata in aysan wali jirin wararka sheegaya in waqti dheeraad ah ay helayaan Musharaxiinta isdiwaangalinaysa.
Warar hoose waxay kaloo cadeynayaan in siyaasiinta Jubbaland qaar kamid ah, gaar ahaana saaxiibada Madaxweynuhu ay soo jeediyeen in la aqbalo mudo kordhin sadex maalmood ah, haddii ay isku diwaangalin waayaana meesha laga saaro oo ay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo.
Wararku waxay sheegayaan in aysan ilaa hadda muuqan Ifafaalo ay xataa sadexdaas maalmood isku diwaangalinayaan siyaasiinta kusugan magaalada Kismaayo, oo ay badankood taageero dhaqaale la sheegay in ay ka helayaan dhinaca dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, balse aan cadeyn loo haynin.
WAKIILKA BEESHA CALANKA EE SOMALIYA.
Waxaad moda wakiilka Besha Calanka ee somali oo so dhexgalay Dorashada ka dhacaysa jubaland,waxa iga yabiyey markuu leyahay fursad halasiyo koxaha mucaradka ku ah mamulka jubaland & shurudaha halaga Dabciyo,sida muqata waxad moda wakilka UN,Xalada somaliya nin kucusub oo aan fahmin siyasada somaliya,waxan oran laha wakilka UN somaliya wa nin Aqoon yahan ah oo mudo ku so jiray siyasada UN hadana wax yabo badan oo uusan fahmin aya jira,hadan Xususiyo Gudiga madaxa banan ee Dorashiyinka Jubaland dad hader la dhisay ma’ah waxay dhisnayen waqti hore,mida kale shurcda gudigas wax badan aya laga bahiyey Baraha Bulshada somalida & kuwa Cala mka oo dhan in UN, tirhado hader 1 halaga sobilabo waxad moda niyad jab in aay ku noqonayso ummada,waxa kale oo jira koxdan malaha hadaf siyasaded oo Qexan marka laga tago in aay mucarad yihin ama dadkale sodirsaday.